NIGELLA LAWSON ကမိုက်ကရိုဝေ့ (ဖ်) မီးဖိုကိုသူမလုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းပြောပြသည် - သတင်း
Cook, Eat, Repeat ပွဲတွင်သူမသည် meecrowavvey တွင်နွေးနေသည်ဟုစာရွက်တွင်အသုံးပြုရန်နို့အချို့ကိုကောက်ယူသည်။ မိုက်ခရိုဝေ့? Mikro Whave ??? ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေက Nigella ရဲ့ပထမဆုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အခါမှာ ထူးခြား စကားလုံး၏အသံထွက်, လူတိုင်းအရည်ပျော်ကျခြင်းသို့အနည်းငယ်သွား၏။ ကိုယ့်အတွက်စောင့်ကြည့်ပါ
ငါတကယ်ကျယ်လောင်စွာရယ်။ microwave ကိုဘယ်တော့မှမှန်ကန်စွာအသံထွက်ပြောခြင်းမရှိတော့ပါ pic.twitter.com/lpJx9dk1qw
- meekro wahvé x (@jackremmington) ဒီဇင်ဘာလ 8, 2020
ဒီနေ့မနက်မှာ Nigella ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ် ဦး ကကြေငြာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး Greg James ကသူ့ရဲ့ရေဒီယို 1 ပြပွဲမှာဖတ်ခဲ့တဲ့။ နီဂျယ်လာကမိသားစုပြက်လုံးတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်နီဂျယ်လာကဤသို့ပြောခဲ့သည်ဟုပြောခဲ့သည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်နီဂျယ်လာသည်အိမ်တွင်မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒါဟာမိသားစုဟာသနည်းနည်းပါပဲ။
နီဂျယ်လာလောဆင်ကမိုက်ခရိုဝေ့ (ဗ်) ကိုဘယ်လိုအသံထွက်သလဲဆိုတာကိုလူတိုင်းဘာကြောင့်တအံ့တ why ဖြစ်မိသလဲဆိုတာသေချာမသိဘူး။ အဲဒါလက်တင်စကားနဲ့အသံထွက်တယ်။
မိန်းကလေးတစ် ဦး အထဲကစားရန်လမ်းညွှန်
- ပက်ထရစ်ဆော့ချ် (@PatrickSocha) ဒီဇင်ဘာလ 8, 2020
တစ်ယောက်ယောက်ကတွစ်တာ:ငါထင်တဲ့တစ်ယောက်တည်းလား@Nigella_Lawsonသူမက Meecro-wavéကိုအသံထွက်လာတဲ့အခါမှာငိုက်မျဉ်းနေတာလား?! အခုတော့သူမကအဲဒီလိုတကယ်ပဲအသံထွက်ထင်နေပြီလား။
သူမ ပြန်လာပြီ : ငါဒီလိုပြောပေမယ့်မဟုတျပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအမှန်တကယ်အသံထွက်ရဲ့ပုံကိုဖွင့်လို့ထင်ပါတယ်။
အခြားတွစ်တာများတွင်နီဂျယ်လာဆက်ပြောသည် ပြောပါ သူမကအမြဲလိုလိုမိုက်ခရိုဝေ့ကိုအသံထွက်နဲ့၊ ခေါ်ခဲ့သည် ဒါဟာအလေ့အကျင့်ဖြစ်လာမယ့်စခန်းဟာသ။
သူမ၏တ ဦး တည်းတွင် Instagram ရေးသားချက်များ တစ်စုံတစ် ဦး က Nigella ကိုမေးမြန်းသည်။ Microwave သည်သင်၏နောက်ဆုံးအစီအစဉ်တွင်ထူးဆန်းစွာပြောခဲ့သဖြင့်သူမတုန့်ပြန်သည်မှာသူမကထိုရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းရည်ရွယ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အပေါ်တစ် ဦး ကမှတ်ချက် နီဂျယ်လာ၏ Instagram
ကျန်သူမ၏ Instagram မှတ်ချက်များမှတစ်ဆင့်လျင်မြန်စွာ scroll လုပ်ခြင်း Nigella သည်မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်မေးခွန်းများနှင့်ပြည့်နေကြောင်းပြသသည်။
သူမသည်ယနေ့နံနက်ခရစ်စမတ်ကိတ်မုန့်စာရွက်ကိုတင်လိုက်သည်။ သူကတစ်စုံတစ် ဦး ကသူမကိုမိုက်ကရိုဝေ့စစ်ပွဲတွင်ချက်ပြုတ်မလားမေးသည်။ ငါသူမယခုမိသားစုဟာသနောင်တရဲ့ခန့်မှန်းတာပါ။
အဆိုပါ VET ကျောင်း၏ cornell ယောက်ျား
တွစ်တာတွင်လူများသည်မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ကိုပုံမှန်နည်းလမ်းဖြင့်တစ်ခါမျှမပြောရဟုပြောဆိုနေကြပြီးတစ်စုံတစ် ဦး ကနီဂျယ်လာအားတွစ်တာတွင်သူတို့မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အားဝီကီပီးဒီးယား၌ပြောင်းလဲမှုကိုသူ၏ဂုဏ်အသရေဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည်ဟုတွစ်တာတွင်ရေးသားခဲ့သည်။
@Nigella_Lawson သင်၏ဂုဏ်အသရေအတွက်မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖိုဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာကိုငါပြောင်းလိုက်ပြီ #NigellaLawson # မိုက်ခရိုဝေ့ pic.twitter.com/rbFtFIID6W
- MadHats (@Mad_Hats) ဒီဇင်ဘာလ 9, 2020
•ဤ 'မည်သည့်ကျော်ကြားမှုစားဖိုမှူးသည်သင်၏ uni ဖြစ်သနည်း' ဆောင်းပါးသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးသင်ပြန်ပို့လိမ့်မည်
• Noel Fielding မှနီဂျဲလာသို့ဤလူငယ်နာမည်ကြီးများခေတ်ကိုသင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါသလား။